တာရာမင်းဝေ | Weenyinthit Bookshelf
ဒီတစ်ပတ်တော့ ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ တာရာမင်းဝေစာအုပ်တွေ အားလုံးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တာရာမင်းဝေ – ကိုးမရှိတဲ့နဝင်း
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နဲ့ကြေးသွန်းယဉ်ကျေးမူ
တာရာမင်းဝေ – သင်နှင့်နံနက်ခင်းကိုသာဝင်ခွင့်ပြုမည်
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နှင့် ကြယ်မြင်လမြင်လောကဓံ
တာရာမင်းဝေ – မှော်ဆရာရဲ့ကျောင်းစာအုပ်
တာရာမင်းဝေ – ကောင်းကင်အကြွေကောက်တဲ့လက်
တာရာမင်းေ​ဝ – ကိုယ့်လက်နဲ့ဖမ်းမိတဲ့ နဂါးငွေ့တန်း
တာရာမင်းေ​ဝ – ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွာသံ
တာရာမင်းေ​ဝ – အရှေ့မြို့ရိုးမှမိုးရေစက်များ
တာရာမင်းဝေ – ပင်လယ်အတုထဲကကျွန်း
တာရာမင်းဝေ – သူအိုးပုတ်လေး ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါ
တာရာမင်းဝေ – ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုရပိုက်
တာရာမင်းဝေ – လရောင်ကိုပန်၍ ညယံ၌လည်း မွေးမွေးဖြူနိုင်ကြပါစေ
တာရာမင်းဝေ – နေရဲ့အင်္ကျီ
တာရာမင်းဝေ – သူသည်ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်
တာရာမင်းဝေ – အနေအထိုင်မတတ်တဲ့ကြယ် (Font problem)
တာရာမင်းဝေ – ရွှေအတောင်ပံ မှာဒဏ်ရာတွေ ပြန်ကောင်းလာတဲ့နေ့
တာရာမင်းဝေ – ယန္တရားအရေခွံနှင့်လူ
တာရာမင်းဝေ – လူငယ်တစ်ယောက်၏ ကျောက်ထွင်းရာဇ၀င်
တာရာမင်းဝေ – ကျောခိုင်းထားတဲ့နေမင်း
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်တူးဖော်ခဲ့သည် မြေစိုင်မြေခဲများအကြောင်း
တာရာမင်းဝေ – စောင်းကြိုးပြတ်ရွာ မွန်းတည့်အလွန် ၄နာရီ
တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နှင့်ဆောင်းရာသီဒသာန
တာရာမင်းဝေ – နတ်ပျိုမအတွက်ပန်း
တာရာမင်းဝေ – စောင်းကြိုးတန်းလမ်းနှင့်လခြမ်း
တာရာမင်းဝေ – ကြယ်သီချင်းနှင့်လမင်းသံစဉ်
တာရာမင်းဝေ – ဆောင်းကြိုးပြတ်ရွာ မနက်(၄) နာရီ တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နဲ့ နတ်ဘုရားရုပ်ထု တာရာမင်းဝေ – စုန်းကိုက်ခံရတဲ့ သစ်သီး တာရာမင်းဝေ – ရှူး တာရာမင်းဝေ – ရွှေဖိနပ်မှာ အစိမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့ ကောင်မလေး အမှတ်တရစာစုများ Scribd Reader
တာရာမင်းဝေ – ပန်းခေတ်ကလမင်း တာရာမင်းဝေ-ကျွန်တော်နဲ့ဧဒ င်ကခြေသည်
တာရာမင်းဝေ-ရွှေဖိနပ်မှာအစ မ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့ကောင်မလေး တာရာမင်းဝေ – ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွာသံ တာရာမင်းဝေ-ကိုယ့်လက်နဲ့ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ့တန်း
တာရာမင်းဝေ သင်နှင့်နံနက်ခင်းကိုသာဝင် ခွင့်ပြုမည်
တာရာမင်းဝေ ကျွန်တော်နဲ့ကြေးသွန်းယဉ်ေ ကျးမှု တာရာမင်းဝေ ကိုးမရှိတဲ့န၀င်း
တာရာမင်းဝေ – ၀င်္ကပါကိုဖွင့်တဲ့သော့
တာရာမင်းဝေ – နေရဲ့အင်္ကျီ တာရာမင်းဝေ – သူသည်ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်နှင့်နတ်ဘုရားရုပ်ထု တာရာမင်းဝေ – ရွှေအတောင်ပျံမှာ ဒဏ်ရာတွေပြန်ကောင်းလာတဲ့ တစ်နေ့ တာရာမင်းဝေ – ကျွန်တော်တူးဖော်ခဲ့သည့် မြေစိုင်မြေခဲများအကြောင်း တာရာမင်းဝေ – စုန်းကိုက်ခံရတဲ့ သစ်သီး တာရာမင်းဝေ – စောင်းကြိုးတန်းလမ်းနှင့်လခြမ်း
ကျွန်တော်နှင့်ကံကြမ္မာလက်နှက်များ (no scribd font)
တာရာမင်းဝေ – ယန္တရားအရေခွံနှင့်လူ (password protect file)
တာရာမင်းဝေ – လူငယ်တစ်ယောက်၏ ကျောက်ထွင်းရာဇ၀င် (password protected file)
တာရာမင်းဝေ – ကျောခိုင်းထားတဲ့နေမင်း (Password Problem )
တာရာမင်းဝေ – အ၀ါရောင်နတ်သမီး (invilid file)
23 Responses to “တာရာမင်းဝေစာအုပ်များ”
stoo says:	December 8, 2008 at 11:07 pm	i cant download တာရာမင်းဝေ – ပင်လယ်အတုထဲကကျွန်း as it showed “cannot extract some characters”
can help me wif this thanks 1
Reply	admin says:	September 8, 2011 at 1:06 am	You should be able to download by now.
Reply	မသက်ဇင် says:	April 6, 2009 at 2:39 pm	တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဆိုက်လေးပါပဲ–
Reply	နှစ်သစ် says:	April 27, 2009 at 2:14 pm	စာအုပ်လေးတွေတော်တော်ကိုစုံပါတယ်
Reply	Aye says:	June 3, 2009 at 6:24 pm	တာရာမင်းဝေ – ၀င်္ကပါကိုဖွင့်တဲ့သော့ link is broken. >_<
Reply	Kunsai says:	September 15, 2009 at 7:45 am	အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ အခြားဘာသာနဲ.စာရင် မြန်မာစာကိုဖတ်ရတာပိုပြီးတော.အရတာတွေ့ပါတယ်။ ဒီက အစ်ကို ကိုလည်း ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
Reply	cutterstep says:	September 22, 2009 at 5:52 am	အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့စာအုပ်တွေ ဖြစ်နိုင်၇င်တင်ပေးပါအုံး။
Reply	ရေခဲ says:	December 16, 2009 at 2:20 am	စာအုပ်တွေအများကြီးတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူး။ အဖိုးတန်ပါတယ်ဗျာ။ အားပေးနေပါ့မယ်။
Reply	Andrewhu says:	January 17, 2010 at 1:35 pm	Thank you very much for thebooks. And I like Tar Yar Min Waialot!!!
Reply	may says:	March 13, 2010 at 6:42 pm	၀င်္ကဘာကိုဖွင့်တဲ့သော့ဖတ်လို့ မရပါရှင်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကျန်သော တာရာမင်းဝေ စာအုပ်များလည်း တင်ပေးပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။
Reply	htoocharr says:	March 15, 2010 at 12:50 pm	ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ ဖြစ်နိုင်ရင် အောင်မြင်ရေးစာလေးတွေကို အဓိကထားတင်ပေးစေချင်ပါတယ် တောင်းဆိုတာပါ ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာထက် ပီတိဖြစ်ရပါတယ် အများအတွက် လဲကောင်းတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ ဗဟုသုတ တွေ ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ အတွက် အစ်ကို ဘ၀ သာယာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ
Reply	naylinnthit says:	January 29, 2011 at 4:41 am	acess denied ဖြစ်နေလို့ တစ်အုပ်မှဖတ်မ၇ပါ။
Reply	admin says:	January 29, 2011 at 8:18 pm	ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ စာအုပ်တွေကို မကြာမီမှာ Google Book အနေနဲ့ တင်ပေးသွားပါမယ်။ တင်ဖြစ်ရင် အကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်။
Reply	phoe kyal says:	May 1, 2011 at 7:53 am	ကောင်းပါတယ်။တော်တော်ကောင်းတယ်။
Reply	min min says:	June 12, 2011 at 2:29 pm	ဒီဆိုဒ်ကလေးကိုဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် ဆရာငြိမ်း
ကျော်နဲ့ဆရာဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ စာအုပ်တွေပါ ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးပါလို့ အကူအညီတောင်းချင်
Reply	လုလင်ကောင်လေး says:	June 18, 2011 at 1:39 pm	အခုလိုဖတ်ရတဲ့အတွက်လလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်..သိုးဆောင်းဂစ်တာတစ်လက်ရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ ကျောက်ထွင်းရာဇ၀င်လိုချင်တယ်ဗျာ…ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့
Reply	gib boy says:	July 17, 2011 at 6:52 pm	အခုလိုစာအုပ်တွေအစုံတင်ပေးထားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	alinyaung says:	July 24, 2011 at 1:41 am	စာအုပ်တွေအများကြီးတနေရာထဲမှာဖတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ scribd ကစာအုပ်တွေက ဒေါင်းလို့မရဘူး ။ google ကစာအုပ်တွေကပဲဆွဲလို့ရတယ်။ အဲတာကူညီပေးပါဦးနော်။
Reply	moe sat says:	September 9, 2011 at 12:18 pm	scribd ka down lo ma ya boo.bar lo lae
Reply	paing moe oo says:	May 7, 2012 at 5:43 pm	ကျေးဇူးပါဗျာ……အရင်ကတော့သူငယ်ချင်းတွေဒေါင်းပေးတာကိုဖတ်ရတာ
နယ်ကဆိုတော့စာအုပ်တွေကစုံအောင်မရှိဘူးလေ ခုတော့ ၀ိညာဉ်သစ် ကြောင့်စိတ်ကျေနပ်ရပါပြီ…………………..အားလုံးပျော်နိုင်ကျပါစေဗျာ
Reply	သားကောင်း says:	July 6, 2012 at 11:14 pm	ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် Admin ရေ ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့စာရေးဆရာရဲ့စာအုပ်တွေကို
Reply	noe says:	January 13, 2013 at 12:28 am	တော်တော် ကောင်းပါတယ် ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ စာအုပ်လေးတွေလည်းတင်ပေးပါဦး
Reply	noe says:	January 13, 2013 at 12:30 am	စာအုပ်တွေအများကြီးပဲ ယူသွားပြီနော် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်